Mmiri Semalt Na-enyere Gị Aka Ịmụta Mfe Mfe na Ngwa Ngwa
Iji mụta ụzọ ndị mmadụ nwere ike isi mepee SEO na 2017, ha ga-amụta ọtụtụ ngwa ngwa na dị mfe echiche iji mee ya nke ọma. N'ikpeazụ, onye ọ bụla kwesịrị ịma otú e si eduzi nyocha na nyocha analysis, mụta otú e si ewu njikọ ma soro ọganihu ha nile, n'ikpeazụ, mụta banyere njikarịcha ọdịnaya.
N'ebe a, Oliver King, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa Semalt , na-ele anya na ụfọdụ ndụmọdụ bara uru n'akụkụ a - houses for sale in cieza spain.
Iji ghọtacha ahịa ahịa SEO na 2017, onye ga-amụrụ onwe ya na ndị nchọgharị ahụ, dịka Mozilla Firefox n'ihi na ọ bụ naanị otu onye Rank Checker na-etinye na ya. Ọzọkwa, otu esi eji Microsoft Excel dị mkpa dị ka enwere oge mgbe mmadụ ga-edepụta isiokwu dị na ya ma debe ha site na iji usoro. N'ikpeazụ, njikọ internet na-arụ ọrụ.
Ndị mmadụ na-eme search engine njikarịcha ụda nke siri ike. N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama, SEO anaghị achọ onye nwe ụlọ ọrụ ịzụta ngwanrọ dị oké ọnụ ma ọ bụ jiri ụlọ ọrụ dị oké ọnụ ahịa hụ ya. Ọ bụ ụdị ọrụ-eme-onwe-gị..Site n'ịghọta otú aga esi aga ya, na otu o si arụ ọrụ, ọ na-adị mfe iji tweaks gaa na ebe nrụọrụ weebụ iji jide n'aka na ọ dị elu karịa na ibe nsonaazụ ọchụchọ. Site n'ime otú a, enwere mmesi obi ike nke okporo ụzọ ka ukwuu ka ọ na-enwetawanye pịa ma na-eleta. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ahụ bụ maka azụmahịa n'ịntanetị, onye nwe ụlọ ahụ ga-enwe nnukwu ọganihu.
E nwere saịtị na ọmụmụ ihe maka ụmụ akwụkwọ ndị na-enyere ndị mmadụ aka ịmụta otú e si ebuli SEO n'enweghi ego. Ihe kachasị mkpa ha na-agụ gụnyere:
Otu esi achọpụta nchịkọta ngwa ngwa nke ga-adọta ndị na-ege ntị kachasị mkpa
Otu esi emegharia ihe di n'ime weebụ iji tinye ihe ndi ozo acho ozo karia Google
Otu esi emepụta njikọ ndị na-eme ka okporo ụzọ laghachi azụ na saịtị ahụ
Otu esi nyochaa ma soro ọganihu nke SEO
Olee otú Nnabata Search Engine njikarịcha
Usoro a gụnyere ọtụtụ vidio ndị dị mfe ịghọta, ha niile na-enye aka ikpughe ihe nzuzo nke imeri usoro SEO. A na-enye vidio ndị ahụ maka ntanetị maka mma maka ya. Na mgbakwunye na nke a, e nwere nyocha nke oge, nke a kwadoro iji nyere aka nghọta, na idobe onye a na - amụrụ ihe ka ọ nọgide na - ege ntị.
Onye ọ bụla nwere obere ntụle banyere SEO maara na ihe nzuzo na-arụ ọrụ nke ọma bụ isiokwu. Usoro ahụ na-amalite site n'ịhụ usoro azịza ndị a na-ejikarị eme ihe iji chọta isiokwu dị mkpa maka ndị na-ege ntị. Mgbe i kwusịrị nke a, nzọụkwụ ọzọ bụ iji nyochaa isiokwu ndị ahụ ma tinyezie ha n'usoro dịka okenye na ewu ewu. Nzọụkwụ ahụ metụtara dịka ọ na-emetụta arụmọrụ. Usoro a gụnyere klas na otu esi atụpụta isiokwu bụ Efficiency Index (KEI).
Ụmụ akwụkwọ, site na ugbu a, ga-enwe ndepụta ogologo nke isiokwu, na nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịkụziri ha otu esi eme ka ọdịnaya ha dị elu. N'ebe a, klas ahụ na-atụle otú ị ga-esi tinye isiokwu ndị dị na ọdịnaya nke saịtị na otu esi ejiri isiokwu ọ bụla dị na ibe dị iche. Ọzọkwa, e nwere nnọkọ ebe ndị nkuzi ga-enyocha esemokwu dị n'etiti isi engines ọchụchọ.
Mgbe njikarịcha ọdịnaya, nzọụkwụ na-esonụ bụ ịdọta ndị crawlers okporo ụzọ na search engine. Ihe ọmụmụ ahụ na-agụnye nlezianya anya banyere otú ndị mmadụ pụrụ isi wukpo njikọ ha na saịtị.